खोकीले कोरोना संक्रमण पत्ता लगाउन सक्छ, जान्नुहोस् कसरी? - E-BreakingNews
Home Korona-Virus खोकीले कोरोना संक्रमण पत्ता लगाउन सक्छ, जान्नुहोस् कसरी?
खोकीले कोरोना संक्रमण पत्ता लगाउन सक्छ, जान्नुहोस् कसरी?
e-Breaking News July 25, 2020 Korona-Virus,
खोकी बाट कोरोना भाइरस संक्रमण पत्ता लगाउने प्रविधि बारे काम भइरहेको छ। यसको विशेष अनुसन्धान शुरू भैसकेको छ । यसका लागि चिकित्सक अनुसन्धान परिषद (आईसीएमआर), भारत र नर्वे सरकारको एक शाखाले सुरु गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।
यसमा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोग गरेर मानिसहरुको खोकीको आवाजबाट कोरोना संक्रमण पत्ता लगाउनको लागि एउटा अध्ययन सुरू भएको छ। नर्वे-भारतको पार्टनरशिप इनिसिएटिभद्वारा एक मोबाइल अनुप्रयोग विकसित गरिएको छ, जसमा भाइरसबाट संक्रमित व्यक्तिहरूले उनीहरूको खोकीको आवाज रेकर्ड गरिरहेका छन्, जबकि शोधकर्ताहरूले कोविड १९ का बिरामीहरूको खोकीको आवाज संकलन गरेका छन्।
क्षेत्रीय मेडिकल रिसर्च सेन्टर (आरएमआरसी), भुवनेश्वरका निर्देशक डा. संगमित्र पाटीले शुक्रबार भने कि कोरोना संक्रमित फेला पार्नको लागि मिश्रित डाटाबेसमा खोकीको आवाजको नमूनाहरु विश्लेषण गरिनेछ।
भुवनेश्वर आईसीएमआर को एक स्थायी अनुसन्धान केन्द्र हो । प्याट्टीले भने, निमोनिया बिरामीहरूको एक्स-रे विश्लेषणको आधारलाइ मानेर विगतमा पनि यस्तै अध्ययन गरिएको थियो । अहिलेको लक्ष्य भनेको निमोनियाका कुन एक्स-रेहरू हुन् र कुन होईन भनेर पहिचान गर्नु थियो। ओडिशाका व्यक्तिहरूले अनुप्रयोग प्रयोग गरेर अध्ययनमा भाग लिन थालेका छन्। रासस
Tags # Korona-Virus
By e-Breaking News at July 25, 2020